Farriinta madaxweynaha Kenya u soo diray Soomaaliya. "Hal Inji kama tanaasuleyno dhulkeena.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa farriin u soo diray Soomaaliya, kadib markii uu diiday xadka Badda Somalia iyo Kenya oo ay calaamadeysay Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ.
Isagoo ka hadlayay maalinta loo dabaaldego dalka Kenya ee Mashujaa Day ayuu sheegay in Kenya ay hore ula kulantay xadgudubyo xuduudaheeda, balse aysan ka tanaaasuleyin hal Inji (Taako) oo dhulkooda ka mida.
Madaxweyne Kenyatta wuxuu sheegay sheegay in maamulkiisu uu ilaalin doono midnimada dhuleed ee dalka Kenya, sida uu yiri, wuxuuna ku celceliyay ilaalinta xuduudaha dalkiisa oo ay ka dhaxleen aabayaashood, isagoo aan soo hadal qaadin Somaliya iyo Maxkamadda ICJ.
“Marar badan, waxaan la kulannay xad -gudubyo dhuleed oo ku aaddan karaamada xuduudaheena. Qaar baa gudaha u soo galay xuduudaheena, qaarna dibadda ayay nooga yimaadeen. Laakiin farriintii aabbayaashii aasaaska noo ah waxay ahayd mid fudud oo ah: ‘Inji kama tanaasuleyno, mana rano intaas oo kale oo naga baxsan” ayuu yiri madaxweynaha Kenya.
Kenya ayaa ka hor timid go’aankii Maxkamadda Cadaaladda ICJ ay ku calaamadeysan xuduud Badeedka Soomaaliya iyo Kenya.
Previous articleYaa ka danbeeyay Kulanka ay yeesheen Famaajo iyo Rooble, maxaase kasoo baxay..?
Next articleSenator ka tirsan Aqalka Sare oo lagu doortay Kismaayo iyo natiijada Doorashada